पुर्वयुवराज शाहको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर तर स्थिर – Health Post Nepal
२०७५ माघ १५ गते २१:२६
पुर्वयुवराज पारस शाहको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर तथा स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ । ह्दयघातपछि नर्भिक अस्पतालमा सोमबारदेखि उपचाररत शाहको स्वास्थ्यबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा चिकित्सकहरुले शाहको अवस्था पूर्ण खतारामुक्त नभएपनि थप अवस्था नखस्किएको जनाएको हो ।
सोमबार ४ बजे घरमा बसिरहेको बेला छातीमा दुःखाई बढेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो । हद्यघात भएपछि उनलाई ९० मिनेट भित्र अस्पताल पुर्याएकोले उपचारमा सहज भएको उपचार सम्लंग्न चिकित्सक प्रा.डा यादवकुमार भट्टले जानकारी दिए ।
डा. भट्टले भने,‘शाहलाई अस्पताल ल्याएपछि मुटुको वाईपास सर्जरी गरिएको थियो । ७२ घन्टासम्म शाहको स्वास्थ्य पूर्ण खतरामुक्त भन्न सकिन्न ।’ चिकित्सहरुले पटकपटक ह्दयघात हुनुमा आवश्यक मात्रामा औषधि नलिनु र वंशाणुगत कारणसमेत भएको बताएका छन् । पारसका पिता ज्ञनेन्द्रको समेत गत वर्ष स्ट्यान्ट प्रत्यारोपण गरेर बन्द धमनी खोलिएको थियो । पूर्व राजपरिवारका अधिकांश सदस्य मुटुको समस्याबाट पीडित थिए ।
अस्पताल पुर्याउन साथ क्याथल्यावभित्र लगेर क्रोनरी एन्जियोग्राफी गर्दा धमनी पूर्ण बन्द भएको पाइएपछि अवरोध हटाउन तत्काल एन्जियोप्लाष्टि गरिएको थियो । एन्जियोप्लाटी गरेर स्टेन्ट प्रत्यारोपणसँगै उनलाई सिसियुमा निगरानीमा राखिएको र मुटुको कार्यक्षमतामा क्रमशः सुधार देखिइरहेको चिकित्सकहरुको भनाई छ । डा.भट्टका अनुसार शाहको रक्तचाप नर्मल भएपनि उच्च कोलेस्टोरलको समस्या छ ।
उपचारमा भट्टसहित चिकित्सकहरु डा. जेपी जैवाल, डा.सन्तोष क्षेष्ठ र डा. नग्मा क्षेष्ठ टोली संलग्न रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
शाहको ह्दयघातको खबरपछि उपत्यकाबाहिर भएका पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरोको स्वास्थ्य स्थिितको बारेमा बेला–बेलामा फोन गरी बुझने गरेको अस्पताल स्रोत जनाएको छ ।